Ogeysiis: Caasimada Online oo soo kordhisay Mobile APP (Fadlan soo degso) - Caasimada Online
Home Warar Ogeysiis: Caasimada Online oo soo kordhisay Mobile APP (Fadlan soo degso)
Ogeysiis: Caasimada Online oo soo kordhisay Mobile APP (Fadlan soo degso)
Caasimada Online, waxay ugu bishaareeneysaa akhristayaasha aan jecelnahay, in waqti iyo dadaal dheer kadib aan ku guuleysanay inaan soo kordhino APP, kuu saamaxaya inaad wararka ka akhrisato. APP-kan ayaa ku shaqeynaya Android (oo ah barnaamijka ay isticmaalaan taleefonada sida Samsung, HTC, LG iyo wixii la mid ah) iyo sidoo kale IOS oo ah barnaamijka uu ku shaqeeyo taleefonka iPhone-ka.
Haddii aad haysato App-ka Caasimada Online, waxaa kuu fududaanaya inaad webka si fudud kusoo gasho, adiga oo aan u baahneyn inaad webka soo booqato. Waxaad fureysaa kaliya app-ka, kadibna wararka oo idil, halkaas ayaad kala soconeysaa. Sidoo kale app-ka Caasimada Online, wuxuu kuu saamaxayaa inaad si fudud oo bilaash ah u rukumato wararka Caasimada Online, kadibna war kasta oo cusub oo soo gala, waxaa kusoo dhacaya fariin aad ka arkeyso shaashaddaada.. Haddaba, Si aad usoo degsato APP-ka cusub ee Caasimada Online, fadlan raac link-yada hoose.
Kadibna, fadlan farriin noogu soo dir caasimada@live.com, oo noo sheeg, sida aad u aragto app-ka. Mahadsanid